ओपोको नयाँ स्मार्टफोन ‘ओपो ए५२’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक| Corporate Nepal
साउन ११, २०७७ आइतबार १५:५५
काठमाडौँ । ओपोले नेपाली बजारमा नयाँ स्मार्टफोन ओपो ए५२ सार्वजनिक गरेको छ । ब्राण्डले सार्वजनिक गरेको नयाँ ह्याण्डसेटको मूल्य रु. २९,९९० निर्धारण गरेको छ । ट्वाइलाइट ब्ल्याक र स्ट्रिम ह्वाइट गरी यो फोन दूई रंगमा उपलब्ध गरिएको छ । यसको मोटाइ ८.९एमएम र वजन जम्मा १९२ ग्राम रहेको छ ।
ओपो ए५२को बजार मूल्य रु. २९,९९० निर्धारण गरिएको छ । साउन १ गतेका दिनदेखि नै यो फोनलाई आफ्ना प्रमुख बिक्री केन्द्रहरु मार्फत कम्पनीले सर्वत्र बजारमा उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ ।